FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO : Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina
Mirongatra indray. Nisesisesy ny fanafihan-dahalo sy fakàna an-keriny tao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Mahabo, nanomboka ny alahady lasa teo hatramin’ny omaly. 15 mars 2018
Nidiran’ny dahalo 70 lahy nanao fanamiana miaramila tao amin’ny kaominina Antsivalana, distrikan’i Mahabo, omaly maraina vao mangiran-dratsy. Nandravarava mihitsy ireo dahalo satria valy faty no tena antony niverenan’izy ireo tao an-toerana, araka ny vaovao azo. Nohararaotin’ireo malaso ireto olona mbola rendriky ny torimaso. Trano roa no nodoran’ireo jiolahy ka vao nahatsikaritra izany ny mponina dia samy namonjy ny ainy tsy ho faty nivoaka ny tranony avy.
Tamin’izany no nanararaotan’ireo olon-dratsy nitifitra ka renim-pianakaviana iray sahabo ho 50 taona no maty teo no eo ary tsy vitsy ireo naratra mafy noho izay tifitra nataon’ireo dahalo ireo izay. Nifanjevo tanteraka tao an-toerana, tsy nisy afaka nanohitra ny fokonolona satria tampoka tamin’izy ireo ny fiverenan’ireo malaso, raha ny fampitam-baovao azo ihany. Efa intelo notafihan’ny dahaloAnkoatra ny famoizana ain’olona sy fandorana trano dia tovovavy efatra ihany koa nalain ‘ireo olon-dratsy hatao takalon’aina.
Raha ny vaovao voaray farany tamin’ny ora nanoratanay dia mbola tsy tafaverina ireo tovovavy. Efa misy mpitandro filaminana avy ao Mahabo kosa nidina ao amin’ny kaominina Antsivalana, omaly maraina ihany. Tsy nisy sahy nanara-dia ny fokonolona satria tena ampy fitaovana ireo dahalo.
Ny alahady 11 marsa lasa teo no efa nidiran’ny dahalo tao Bezezika, kaominina Antsi- valana ary mbola ireo nanafika omaly ihany no voalaza fa tompon’antoka tamin’izany. Namoizana ain’olona toy izao ihany koa tao an-toerana saingy nanohitra kosa ny fokonolona tamin’izany ary tafaverina tamin’ny tompony ny omby nangalarin’ireo malaso.
Ny alatsinainy mbola niverina ireo olon-dratsy saingy tsy tanteraka ny fanafihana satria efa niandry ny mponina, ka voaro ny ainy sy ny fananany tamin’izay. Ny omaly ity kosa dia tena tsy navelan’ireo malaso raha tsy nitondra faisana ny vahoaka tao amin’ny kaominina ambanivohitr’ Antsivalana vao niala ny tanàna ireo olon-dratsy.
Miteraka disadisa eo amin’ny samy mponina
Taorian’ny fanafihan-dahalo izay dia nifanjevo ny olona ao amin’ny kaominina Antsivalana satria mizara roa ny tanàna sy ny karazan’ olona mipetraka any, araka ny fampitam-baovao voaray. Mialoha n y nahatongavan’ny mpitandro filaminana avy ao Mahabo hampandry tany dia nisy fifampitifirana sy fifamaliana tamin’ireo mponina satria nisy nilaza fa karazan’ olona avy amin’ny fokontany mifanila aminy ireo malaso nanafika teo an-tanàna. Hatramin’ny ora nanoratanay dia mbola tsy milamina ny any an-toerana na efa ao aza ireo mpitandro filaminana.
Voalaza fa matetika isehoana fanafihan- dahalo sy halatr’omby ao amin’ny Distrikan’i Mahabo ankehitriny ary mihorohoro tanteraka ny mponina manoloana ny zava-misy any an-toerana.